Dabni Taaksii Qabeenya Dabalataa irratti raawwatamu akka hafuuf
Gibirri (taaksiin) tooftaa mootummaan seeraafi danbiirratti hundaa'ee ummataafi dhaabbileerraa galii itti walitti qabee deebisee misooma biyyaatiif oolchuudha.
Gibirri kallattii, alkallattiifi 'kanneen biroo' jedhamee iddoowwan sadiitti qoodameeti mindeeffamaa kiraawwan adda addaafi hojii daldalaarraa kan argamu yoo ta'u, galiiwwan gibiraa haala kanaan sassaabamanis moggaasaafi akaakuuwwan gara garaa qabu.
Kanneen keessaa tokko Taaksii Qabeenya Dabalataa (TQD) ykn Value Added Tax' jedhamu yoo ta'u, akaakuun gibira kun fayyadamaa ykn bitataadhaan kan kanfalamuudha. Taaksiin kun karaa abbaa taayitaa galiiwwanii akka galuuf daldalaan ykn dhaabbanni tajaajila kennuurratti bobba'e kan galmee herregaa qabachuuf dirqamuufi galmaa'aan TQD shoora guddaa qabu.
Ummanni dhaabbilee kanneenirraa tajaajilamus omisha daldaltoota kanneenii bitatus waan tajaajilameef ykn bitateef nagayee gaafachuu akka dirqama lammummaatti fudhatee milkaa'ina sassaabbii gibiraa keessatti gumaachisaa olaanaadha.
Abbaan Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa dhiyeenya akka ibsetti ji'oota saddeet darbanitti walduraa duubaan galii idileefi mana qoheessaarraa walitti qabuuf karoorfame keessaa dhibbantaa 102fi 83.3 milkeessuun yoo danda'amellee kan TQD garuu gadaanaadha.
Kanaanis yeroo eerame kana keessatti naannichatti galmaa'aa TQD kuma 40 irraa qarshii biliyoona 1.45 sassaabuuf karoorfamee qarshii biliyoona 1.3 qofti akka sasssaabameefi kunis karoora keessaa dhibbantaa 77.6 qofa akka ta'eedha kan ibsame.
Karoora kana kan gadi buusees galmaa'aan TQD galmee herregaa qabachuuf dirqame harki caalaan gurgurtaasaa kamuu nagayeefi nagayee qofaan raawwachuu dhabuufaan qorannoodhaan mirkanaa'eera.
Fayyadamaanis muuxannoo nagayee gaafachuu kan hingabbifanne ta'uufi to'annoofi hordoffiin gama abbaa taayitichaatiin taasifamaa tures laafaa ta'uun ibsameera.
Hunda caalaa galmaa'onni TQD maallaqa nagayee muree sassaasabe amanamummaan mootummaaf galchuun qaroomina ta'uu hubatanii dirqamasaanii bahachuu qabu. Warri nagayee murraa hinjirres gochichi yakka ta'uu beekanii guddina biyyaa keessatti gumaachasaanii bahachuu qabu.
Gibira ykn taaksii sassaabuuf heeraan aangoon kan kenname akkuma biyya kamiittuu mootummaa qofaafi. Aangoo kana cabsuudhaan daldaltoonni nagayee hinmurre taaksii kana sassaabanii saanduqa ofiitti galfachuun yakka ta'uun sirriitti hubatamu qaba.
Dabni naannawa kanatti raawwatamu murtii galii dhuma waggaatti taasifamuufi guddina dinagdee biyyaarratti, haqummaa dhabamsiisuudhaan nageenya, dinagdeefi siyaasa biyyaallee kan miidhu ta'uun hubannoo cimaa argachuu mala.
Daldaltoota xiyyootti bahanii rakkoo kana keessatti argaman gaafatamoo gochuurrattis hojii hojjetamaa jiru rakkoo bal'aa waan qabuuf hojmaatawwan dhimma kanaaf qaawwa uuman mara cufaa, daldalaa amanamummaan dirqamasaa bahataa jiru addatti onnachiisaa deemuun malchiisaadha.
Torban kana/This_Week 9624
Guyyaa mara/All_Days 1819044